We Fight We Win. -- " More than Media ": ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအတွက် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှ ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်း။
ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအတွက် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှ ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်း။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့နှင့် အခြားသော လူငယ်များ ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှူ ကွန်ရက် သည် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွတ်လပ်သော အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဘက်လိုက်မှုကင်းသော ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများကို ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ပါတီအောင်နိုင်ရေး မဟုတ်သလို ယခုအဖွဲ့အစည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းထံမှ အထောက်အပံယူမည် မဟုတ်ဟုလည်း ပြောဆိုသွားသည်။ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့မှစတင်၍ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းကာ စတင်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောဆိုသွားသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းပြီး သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်သွားမည်ဟု မတ်လ ၂၃ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
photos: Yangon Press International
ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကွန်ရက်သည် ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွတ်လပ်သော အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် ဘက်လိုက်မှုကင်းသော ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများကို ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများကို မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူပြည်လူထု၏သဘောထားများအား အဓိကအခြေခံကာ လုပ်ဆောင်သွားမည်။ ထို့ပြင် မိတ်ဖက်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်လည်း သတင်း အချက်အလက် အပြန်အလှန်ဖလှယ်သွားမည်။
လက်ရှိအစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပုဂ္ဂလိမီဒီယာများသည် ယခင်အခြေအနေကထက် ပိုမိုပွင့်လင်းလွတ်လပ် လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဥပမာ - ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကွယ်လွန်ပြီးသူများလည်းပါဝင်နေကြောင်းကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားသည့် သတင်းမျိုးဖော်ပြလာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ကွန်ရက်၏ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသုံးသပ်ချက်ကို ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာဖော်ပြချက်များကို ဦးစားပေး၍ အခြေခံသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အွန်လိုင်းမီဒီယာ များ၏ဖော်ပြချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ရာခိုင်နှုန်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် ကောက်ယူဖော်ပြ သွားမည်ဖြစ်သည်။ အနီးကပ်အကြိုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတစ်ရပ်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တစ်ပတ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေများမှ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကွန်ရက်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကာ စောင့်ကြည့်သွားမည် ဖြစ်သည်။
အခြေပြုစောင့်ကြည့်ရမည့် မီဒီယာများမှာ -
သတင်းအချက်ဖလှယ်ခြင်းကိုလည်း အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြန်အလှန် ဖလှယ်ခြင်းပြုလုပ်သွားမည်။
(က) ပြည်တွင်းဂျာနယ်နှင့် မဂ္ဂဇင်းများမှ သတင်းထောက်များ၊ အယ်ဒီတာများ
ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး တင်ပြလာသည့် ထူးခြားချက်များကို စုစည်းခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်။ (မတ်လ(၂၃)ရက်နေ့မှစတင်ပြီး တယ်လီဖုန်းမှ သတင်းအချက် အလက်များဖြန့်ဝေခြင်း၊ သတင်းတိုစာသားပေးပို့ခြင်းနှင့် အွန်လိုင်းမှ သတင်းလက်ခံဖြန့်ဝေခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်။)
(၃) ရွေးကောက်ပွဲအကြိုနေ့နှင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့စောင့်ကြည့်မှု
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကွန်ရက်သည် ၈၈ အရေးတော်ပုံက ပေါက်ဖွားလာသော လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ခေါင်းဆောင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်ဖြစ်ရာ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့် လေ့လာမှုကွန်ရက်၏ လူငယ်မျိုးဆက်ကွန်ရက်များသည်လည်း နယ်မြေဒေသအသီးသီးတွင်ရှိကြသည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသော အတွေ့အကြုံရှိလူငယ်မျိုးဆက်များ၊ ပြည်သူများသည်လည်း စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များမှတစ်ဆင့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက် စာရွက်စာတမ်းများဖြန့်ဝေခြင်း၊ လိုအပ်သောနည်းပညာများကို ဖြန့်ဝေခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး စောင့်ကြည့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကွန်ရက်ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့က တယ်လီဖုန်းဖြင့် သတင်း လက်ခံခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သွားမည်။ (ထူးခြားချက်တစ်ခုချင်းအလိုက် သုံးသပ်ချက် ထုတ်ပြန်သွားမည်။)
(၄) ရွေးကောက်ပွဲအပြီး သုံးသပ်ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း
ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် ရရှိလာသည့်သတင်းအချက်အလက်များထဲမှ ထူးခြားချက်များကို ကိစ္စရပ် တစ်ခုချင်းအလိုက် အွန်လိုင်းမှ ထုတ်ပြန်သွားမည်။ တစ်ပတ်အတွင်း သုံးသပ်ချက်အကြမ်းကိုလည်း ထုတ်ပြန် ပေးသွားမည်။ တစ်လအတွင်း သုံးသပ်ချက်အချောကို ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်။
သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ခြင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ ဖုန်းနံပါတ်များဖြင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
(က) ကိုကိုကြီး 0973215574 (ဈ) မမီးမီး 0949270937
(ခ) ကိုအံ့ဘွယ်ကျော် 0973216084 (ည) Generation Wave 0949577178
(ဃ) ကိုမာကီး 0973247983 (ဋ) ကိုမောင်မောင်စိုး 0973096672
(င) ကိုသက်ဇော် 0943050844 (ဌ) မမြနန္ဒာ 0973023795
(စ) ကိုမျိုးအောင်နိုင် 0943071171
(ဆ) ကိုဘောင်းဘောင်း 095040597
(ဇ) ကိုဆန်နီ 0973166805
ဘယ်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲလို့ လူစာရင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်..ပါလေရာငါးပိချက်တွေဘဲ...ဖွဲ့လည်းဖွဲ့နိုင်တဲ့ ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေပါလားနော်...
I do not understand why 88 student do not collaborate with NLD. Otherwise, People will be more happy and appreciate both NLD and 88 generation. Now, Asasaying goes " two people, three groups"